The Gardener: လွမ်းစိတ်နဲ့ညွတ်နေတဲ့သစ်ကိုင်းဖျား
ဘာလိုလိုနဲ့လေးနှစ်။ လောကကြီးထဲက မမြင်ရတဲ့ တွင်းနက်ကြီးတစ်ခုဟာ တကယ်ပဲရှိလိမ့်မယ်ထင်ရဲ့ ............။ ချစ်တဲ့သူတွေချည်း တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက်ပြုတ်ကျ ...................ဒီတွင်းကနက်တယ်။ ဒီအလွမ်းကခက်တယ်။ ........ အဆုံးမဲ့ အနက်အရှိုင်းထဲ ..... ဆင်းသွားကြည့်လိုက်ရင် ... ဘယ်တော့မှ တွင်းအောက်ခြေကို မရောက်နိုင်ဘူး ...............။
အလင်းတစ်စမှ ခုန်မထွက်နိုင်တဲ့ တွင်းနက်များ။
Doris Day ရဲ့ Que Sera Sera ကို အခုနကတင် သူဆိုနေခဲ့သေးတာ။ ရုတ်တရတ် အမြင့်ဆုံးလွှတ်တင်ထားတုန်း ကိုင်းကန်သွားတဲ့စွန်လိုပေါ့ ... သေခြင်းတရားနဲ့ကပ်ထားတဲ့ ရှင်သန်ခြင်းကိုင်းလေးက လောကဓံလေပြင်းတွေနဲ့ နှစ်အတော်ကြာ ဆန့်ကျင်ပြီးရင် ကန်ထွက်သွားရတာပဲ။ သူပေါ့ပါးသွားတယ်ဆိုရင် ကျွန်တော့်ရစ်ဘီးကို လွှင့်ပစ်လိုက်ပါ့မယ်။ ..... စကြဝဠာသုံးလေးခုခြားနေတာကလွဲရင် ... စိတ်ထဲမှာ နီးကပ်လွန်းနေတယ်။
နေကောင်းပါတယ်လို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တစ်ခုမှာ သူပြောခဲ့သေးတာပဲ။ ဟုတ်တယ်။ သူနေပြန်ကောင်းလာမှာပါ။ .... ဒီဇင်ဘာမှာ ငါတို့လျှောက်လည်ကြမယ် ... လို့သူပြောခဲ့သေးတယ်။ ဟုတ်တယ် အဲဒါကို ယုံနေတုန်း .......ဒီဇင်ဘာက ပျော်စရာကောင်းတယ်။ midnight mass အတူသွားတက်မယ့် မိသားစုတစ်စုအကြောင်းလည်းပါ၊ ကိုးနှစ်ကွဲကွာနေတဲ့ မိသားစုလေးယောက်ရဲ့ဆုံမှတ်လည်းပါ။ silent night ဆိုမယ့်သူလည်းပါ၊ jingle bell ဆိုမယ့်သူလည်းပါ ........... ဘုရားကျောင်းမှာအိပ်မယ့်သူလည်းပါ၊ ပုံပြင်တွေဟာ အရှည်ကြီး .........။ နွေးထွေးတဲ့ ရယ်မောသံများ ... ပဲ့တင်ပြန်နေတယ်။ hymn စာသားတွေကို သူရွတ်လို့ ဘေးနားလေးတင်ရှိနေခဲ့သေးတာ။
သူပြန်လာမလားလို့မျှော်နေတဲ့ခွေးလေးကိုတွေ့တော့ ... သူပြန်လာမှာပါ၊ ခဏထွက်သွားတာပါလို့ပြောပြီး ခွေးလေးကို အိမ်ထဲပြန်ခေါ်ဖို့ကြိုးစားတယ်။ ခွေးလေးက ပြန်မဝင်ဘူး။ လမ်းကိုမျှော်ကြည့်နေတယ်။ ... ကျွန်တော်လည်း လမ်းကိုမျှော်ကြည့်ပါတယ်။ ဒီတစ်ခါလည်း ရုံးနောက်ကျတာဖြစ်မယ်လို့တွေးမိတယ်။ လမ်းထိပ်ကသွားစောင့်ရင်ကောင်းမလား။ ခွေးလေးနဲ့ခွေးရှင်ဟာ မျှော်နေကျလူကို မျှော်နေမိတယ်။
လွမ်းဆွတ်ခြင်းတွေဆွတ်ထားတဲ့ နေ့စွဲတွေဟာ လွမ်းခြင်းတရားသင်းပျံ့နေလိမ့်မယ်။ မိသားစုဟာ အမဲ့နဲ့ပေါင်းပြီး အမိမဲ့သားစုဖြစ်လာတယ်။ နေရောင်တွေက သွေးရောင်၊ အဖြူရောင်ဟာ လူနာလွှမ်းတဲ့ ပုဝါ၊ အသက်ရှူစက်က အသက်ရှူပြီး နှလုံးခုန်စက်က စက်ရဲ့ရွေ့လျားမှုလှိုင်းတွေကိုပြတယ်။ ဒီအခန်းတွေကို video ထဲမှာကြည့်ပြီးပြီ။ အပြင်မှာဘယ်လိုနေလဲ။ သက်သာလား၊မောနေလား။ ဘယ်လိုလဲ ဒီနေ့ဘာဟင်းချက်ထားသလဲ၊ အသက်ရှူရခက်လား၊ဆေးသောက်မလား၊ကော်ဖီသောက်မလား၊ပလာတာစားမလား၊ခေါက်ဆွဲကြော်စားမလား၊ စားချင်တာစားလို့ရတယ်။ ဘယ်လိုပဲမေးမေး မှိတ်ထားတဲ့မျက်လုံးတွေဟာ ပြန်မဖွင့်လာတော့ဘူး။ စက်တွေကိုရပ်လိုက်ရင် သူဆက်လက်ထွက်ခွာသွားလို့ရမယ်လို့ ဆရာဝန်ကပြောတယ်။
အနားမှာ အမြဲရှိနေတဲ့ အရိပ်ဟာ ပျောက်မသွားဘဲ စိတ်ထဲတိုးဝင်သွားတယ်။ နေ့တွေဟာ တသမတ်တည်း။ ညတွေဟာတသမတ်တည်း။ ကြာရင်မေ့သွားမယ်လို့ ဘယ်သူတွေပြောခဲ့သလဲ။ တော်တော်မှားတာပဲ။
ကြာလေ ရင့်လေပဲ။ အလွမ်းနဲ့ဝိုင်နဲ့အတူတူ။
ခရီးတွေက ဝေးတာမဟုတ်ပါဘဲ ................ အပြန်နောက်ကျနေတယ်။ ဘယ်တော့ပြန်လာမလဲ။ ဘယ်တော့လိုက်လာခဲ့ရမလဲ။ ဘယ်တော့ပြန်တွေ့မလဲ။ ဘယ်တော့ထွေးပွေ့ဖက်ထားမလဲ။ ဘယ်တော့လဲ .........။
ခွေးလေးတွေကတော့စိတ်မရှည်ကြဘူး၊ သူတို့ရဲ့မျှော်သူ နောက်ကို လိုက်လံရှာဖွေဖို့ လမ်းကနေထွက်သွားကြတယ်။ ............. တွေ့သွားပြီထင်တယ်။ တစ်ကောင်မှ ပြန်မလာကြဘူး။
(4=T=H Y=E=A=R O=F F=E=E=L=I=I=N=G B=L=U=E.
R=I=P D=E=A=R=E=S=T M=O=M.
M=A=Y G=O=D B=L=E=S=S Y=O=U.)